Nolimbook နှင့် Nolimbook +၊ Carrefour ၏ eReaders | eReaders အားလုံး
Villamandos | | eBooks, စာဖတ်သူများ
ကျနော်တို့အကြောင်းပြောနေတာပါပြီ Carrefour သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်စာဖတ်ခြင်းဈေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် eReader ကိုစတင်ရန်စီစဉ်သည်, Amazon သို့မဟုတ် Kobo ကိရိယာများအတွက်တကယ့်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုလည်းဖြစ်သော်လည်းယနေ့အထိဤ eReader ကိုတရားဝင်တင်ဆက်ခြင်းမရှိသေးပေ။ Nolim နှင့်စပိန်၌ရောင်းပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ပြီးသား Nolim သိတယ်အဖြစ် ၎င်းကိုမတူညီသောဗားရှင်းနှစ်မျိုးဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ Nolimbook နှင့် Nolimbook + ၎င်းကိုအောက်တွင်အသေးစိတ်သုံးသပ်သွားမည်ဖြစ်သော်လည်း Carrefour သည် Nolim.es ပလက်ဖောင်းအားအစုလိုက်အပြုံလိုက်စားသုံးမှုကွင်းဆက်မှတိုးမြှင့်ပေးသောဒစ်ဂျစ်တယ်စာအုပ်အရောင်းဆိုင်ကိုတင်ပြခဲ့ပြီး၎င်းသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်းစာအုပ် ၃၀,၀၀၀ ကျော်နှင့်အတူဤအမျိုးအစားစာအုပ်ဆိုင် ၃ ခုအနက်ပါ ၀ င်လိမ့်မည်။ မကြာမီ 2015 ခေါင်းစဉ်မှကြီးထွားလာလိမ့်မယ်။
eReaders အသစ်နှစ်ခုအတွက်ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
2 Nolimbook +
အတိုင်းအတာ: 116x155x8 မီလီမီတာ
အလေးချိန်: 190 ဂရမ်
ဘက်စုံထိတွေ့မျက်နှာပြင် - ၆ ''
resolution ကို 758 * 1024 px
32 Gb အထိ Micro SDHC ချဲ့ထွင်မှုဆိပ်ကမ်းကို
Micro USB 2.0 USB ကြိုးပါဝင်သည်
1900 mAh ဘက်ထရီကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် - ၂ ပတ်
image format: JPEG, PNG, GIF, BMP, ICO, TIF, PSD
Ram 256 MO ကို DDR3
ဘာသာစကား ၁၅ မျိုးကိုကက်တလန်၊ ဘစ်စကီ၊
ဆော့ (ဖ်) ဝဲ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း - PDF ရရှိနိုင်မှုကိုရိုးရှင်းလွယ်ကူခြင်း၊ မှတ်စုများ၊ မှတ်သားထားမှုများ၊
စာသား: ePUB, PDF၊ Adobe DRM, HTML, TXT, FB2
အတိုင်းအတာ 116x155x8 မီလီမီတာ
အလေးချိန် ၁၁၅ ဂရမ်
၆ လက်မထိတွေ့သည့်မျက်နှာပြင် e-book
FrontLight (illuminated screen) - မမြင်ရတဲ့အလင်းကိုပျံ့နှံ့နေတဲ့ရုပ်ရှင်
ပုံရိပ်ပြတ်သားမှု 758 × 1024 px
မိုက်ခရို USB ဆက်သွယ်မှု
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ၉ ပတ်
RAM ကို: 256M သို့မဟုတ် DDR3
သူတို့အတည်ပြုခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းထုတ်ကုန်နှစ်ခုလုံးကို Carrefour စင်တာများအားလုံးတွင်ရောင်းချပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အတွက်သီးသန့်သီးသန့်နေရာတစ်ခုလည်းရှိသည်။ ထိုနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုပေးရန်လေ့ကျင့်သင်ကြားထားသောအထူးကျွမ်းကျင်သူများလည်းတက်ရောက်လိမ့်မည်။
စျေးနှုန်းက အဆိုပါ Nolimbook များအတွက်€ 69 နှင့် အဆိုပါ Nolimbook + များအတွက်€ 99.
သင်၏ eReaders နှစ်ခုဖြင့်ဒီဂျစ်တယ်စာဖတ်ခြင်းအတွေ့အကြုံကိုခံစားရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » Software များ » eBooks » Nolimbook နှင့် Nolimbook +, Carrefour eReaders တို့သည်ယခုစပိန်တွင်တရားဝင်ဖြစ်သည်
Nolimbook + အသစ်ကိုစမ်းသပ်ပြီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါတယ်